The Galaxy Note FE nwere ike iru mba ndị ọzọ mgbe ọ gachara nke ọma na South Korea | Gam akporosis
Samsung na-enwe 2017 dị egwu, anyị ka nọkwa ọkara ebe ahụ. Fridaybọchị Fraịdee gara aga ekwentị ahụ rere Galaxy Note FE ma ọ bụ "Fan Edition"N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, nke ahụ dị na Galaxy Note 7 na afọ gara aga ga-ewepụ ma na ugbu a, eweghachiri nke ọma yana ụfọdụ mgbanwe, dị na obodo ụlọ ọrụ nwere oke mbelata ọnụahịa.
Ụlọ ọrụ ahụ tinye maka ire ere gburugburu mpaghara 400.000 nke ọdụ a na South Korea ma o doro anya na ha "na-efe" na shelf site na ụlọ ahịa ebe ọ dị. Nke ukwuu nke mere na ọ na-eme atụmatụ na Galaxy Cheta FE amụbawo kwa ụbọchị ngwaọrụ activations site 60 percent kemgbe ya igba egbe.
O doro anya na ọtụtụ puku ndị ọrụ South Korea egosiwo mmasị ha na ịnweta Galaxy Note FE nke dị na ọnụahịa nke 610 dollar (pasent 20 dị ọnụ ala karịa na mbido mbụ ya n'afọ gara aga), na ụdị Black Onyx na Blue Coral nke agbazigharị Note 7 bụ ndị kachasị ewu ewu n'etiti ndị na-azụ ahịa dịka, n'eziokwu, a ga-eresị ha n'ụlọ ahịa ụfọdụ.
Samsung ahọrọla ịzụ ahịa Galaxy Note FE a "nrụpụta nwere oke", nke ahụ bụ, dị ka ohere maka ezi Fans nke usoro ihe ngosi nke Galaxy iji nweta otu nke ekwentị a bụ nke akụkọ ihe mere eme n'ime ụlọ ọrụ ekwentị mkpanaaka. N'ihi ya aha ya, "Fan Edition", ya mere onye ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ ekwupụtala na Investor na, ozugbo erere nkeji ndị a na-ere na South Korea, ha agaghị aza azịza.
Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ahụ na-emepụta ụkọ akụrụngwa nke njedebe (na-eme ihe ọchị mgbe ọ kwụsịrị ahịa maka ihe nchekwa) onye ga-ama atụmatụ atụmatụ Samsung gwara ndị Investor na Enwere ike ibido Galaxy Note FE na mba ụwa ma emechaa ọnwa a. Na agbanyeghị na amabeghị mba ọ ga-eru, o doro anya na ọ ga-ejedebe ahịa ole na ole.
You ga-azụta Galaxy Cheta FE ọ bụrụ na Samsung na-ebupụta ya na mba gị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ihe ngosi Galaxy FE nwere ike iru mba ndị ọzọ mgbe ọ gachara nke ọma na South Korea
Sony Music ga-agbakwunye nkwado maka gam akporo Auto n'oge na-adịghị anya